Nzira yekuvanza Apple Music icon pane iyo iPhone | IPhone nhau
Nzira yekuvanza Apple Music Icon pane iPhone
Kubva kuvhurwa kweApple Music, Apple itsva yekushambadzira mimhanzi sevhisi, zvishoma nezvishoma yakawana vamwe vashandisi. Parizvino uye sezvakataurwa naApple mukubvunzurudzwa kwakasiyana, nhamba yevanyoreri veApple Music ndeye mamirioni gumi nerimwe, chimiro chisina kushata zvachose, tichifunga nezve sevhisi yave ichishanda kwenguva isingasviki gore.
Zvakadaro, ichiri nzira refu kubva kuSpotify manhamba ekupedzisira, ayo zvinoenderana nenhamba dzavakazivisa mazuva mashoma apfuura, ine vangangopfuura vanopfuura mamirioni makumi maviri nevatanhatu. Munguva imwecheteyo kubvira Apple Music payakaburitswa, Spotify yakawana mamirioni masere vanyoreri apo Apple Music 8.
Hazviite sekudaro kusvika kweApple Music kumusika kwakonzera kubuda kukuru kwevashandisi veSpotify, sezvakavimbiswa nenyanzvi dzakawanda. Zvakare, Spotify haisati yamboona kusvika kweApple Music pakati pevanonyoresa.
Kubva pakasvika uye kufararira kwemasevhisi ekushambadzira masevhisi, zvinoita sekunge vashandisi vakasarudza kubhadhara mari yemwedzi nemwedzi uye vanakirwe neyavo mimhanzi yavanofarira nemumhanzi.Panzvimbo yekutarisa Iyo Pirate Bay maalbum azvino kubva kune vaunofarira maartist. Asi havazi vese vari kuda kubhadhara kunyorera.
Kune vazhinji vashandisi vanosarudza kutevedzera echinyakare nzira kana vanosarudza kuteerera kune mamwe marudzi ezvinyorwa kubva kumidziyo yavo, senge podcasts. Kana mimhanzi isiri yako chinhu, saka tinokuratidza maitirwo eApple Music icon kubva ku iPhone yako.
Viga Apple Music icon pane iOS
Maitiro acho akapusa uye haadi Jailbreak, nekuti Apple yakawedzera sarudzo yekuimisa kuburikidza nemamenyu. Kune izvi tinoenda Zvirongwa> Mumhanzi uye tinobvisa yekutanga tabu inoonekwa iine zita rekuti Apple Music. Iyi sarudzo haina kukanganisa zvirimo zvatakachengeta muApple Music, zvinongovanza chiratidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nzira yekuvanza Apple Music Icon pane iPhone
Steve Jobs anomhanya kunze kwaOscar, asi makorokoto, Leo!
WhatsApp inogamuchira yekukosha kugadzirisa